5 I-imeyili Yamathrendi Omakhalekhukhwini Odinga Ukuwacabangela | Martech Zone
Enye yezinto esivame ukuyenza ukunaka ukuqhathanisa ithrafikhi yethu namanani avulekile kusuka esikhathini esifanayo ngenyanga edlule noma esikhathini esifanayo ngonyaka odlule. Ukuhlola amamethrikhi akho nokubona ukuthi usebenza kahle kangakanani kubalulekile - kodwa futhi kufanele ulungise ukuthi abathengi bashintsha kanjani. Iselula ingenye yalezi zindawo lapho kufanele unake khona ngoba izinombolo zehluke kakhulu ngokuhamba kwesikhathi.
Eminyakeni embalwa edlule iselula ikhule ilawula ingxenye ebalulekile yezwe le-imeyili. Kuvulwa kwayo, kubalwa cishe i-50% yenani eliphelele livulwa unyaka wonke, lenze ukwenziwa ngcono kweselula kube yisidingo sabo bonke abalingisi. Kodwa-ke, ngenkathi iselula ikhuphuke ukubaluleka kwayo, ideskithophu ne-webmail kuseseyingxenye enkulu yokuthengisa nge-imeyili. Ukukusiza ukwandise uhlelo lwakho lwe-imeyili ukuxhumana namakhasimende akho, i-infographic yethu entsha igqamisa izitayela eziyisihlanu eziyinhloko zeselula okudingeka wazi.
Kule infographic, 5 Amathrendi weselula avela ku-ReturnPath, uzothola izinguquko ezithakazelisayo ekuziphatheni kokusetshenziswa kweselula:
Ngaphezu kwama-50% awo wonke ama-imeyili manje asevulekile kuselula. Ngabe ama-imeyili akho enzelwe ukubukwa kweselula?
Izilinganiso ezivulekile ze-imeyili ziyaqhubeka nokwehla njengoba sisondela osukwini lukaKhisimusi. Ngabe ubuthumela okwamanje?
Ukusetshenziswa kwethebhulethi kuqhathaniswa nokusetshenziswa kweselula akukashintshi kangako ngonyaka odlule.
Ukuhlukanisa izethameli zakho ngezwe kungaholela ekuziphatheni okuhluke kakhulu kwe-imeyili phakathi kwamapulatifomu namadivayisi.
Uma uku mboni ethile, uzobona imiphumela ehluke kakhulu kunamabhentshi we-imeyili.
Tags: amazinga evulekile e-imeyili yedeskithophuimeyili ledeskithophui-imeyili ephathekayoama-imeyili avulekile eselulaizitayela ze-imeyili zeselulaimeyili ephathekayoukumaketha amaselulaamanani avulekile eselulaizitayela zeselulaindlela ebuyela emuvai-imeyili yethebhulethiamanani we-tablet avulekile amananiimeyili yethebhulethi
I-Digital Age Ishintsha Ngokushesha Konke